ကယ်လိုရီမစားတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ဘယ်အရာကဝိတ်ပိုကျစေသလဲ??? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကယ်လိုရီမစားတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ဘယ်အရာကဝိတ်ပိုကျစေသလဲ???
ကယ်လိုရီမစားသုံးတာဟာ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာထက် ပိုပြီး ထိရောက်ပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာတော့ ကိုယ့်ခန္ဒာကိုယ်အချိုးအစားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တော့ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာက ပိုမိုပြီး ထိရောက်ပြီး ဝိတ်ကျတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၃၅၀ဝကယ်လိုရီဟာ (၁ပေါင် (ဝ.၄၅ ကီလိုဂရမ်) ကိုယ်အလေး ချိန်နှင့်ညီမျှပါတယ်။ အကယ်လို့များ တစ်ရက်ကို (၅၀ဝ)ကယ်လိုရီ လျော့သွား ပါက တစ်ပတ်လျှင် (၁) ပေါင် (၅၀ဝ ကယ်လိုရီ _ ၇ ရက် = ၃၅၀ဝ ကယ်လိုရီ)လျော့ကျသွားမှာပါ။
လူအတော်များများကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏတွေ ဖယ်ထုတ်ဖို့ ခဲယဉ်းတာကြောင့် အစားအသောက်ကို ထိန်းစားရ ခြင်းကိုပါ ပြုလုပ်ကြရပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ကယ်လိုရီလျော့စားသလိုပဲ လေ့ကျင့်ခန်းပါ တွဲဖက်ပြီး ပြုလုပ်တာက ဝိတ်ပိုကျစေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကယ်လိုရီလျှော့စားတာကလည်း သင့်ရဲ့ ဝိတ်ကျမှုပေါ် အနည်းငယ်ထိရောက်ပေမယ့် အစားအစာကို ပုံမှန်စားသုံးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာကတော့ သင့်ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အလေးချိန်ကို သိသိသာသာအကျိုးထိရောက်မှုရှိနေတာပါ။